मनोरञ्जन Archives - Speak Corner
Featured पछिल्लो २४ घन्टाभित्र कोरोना संक्रमणबाट १० जनाको निधन १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured घिरौलाका १० फाइदा १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured मोरङमा होटल साहुले कुट्दा ग्राहकको मृत्यु १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured नरिवल पानी पिउँदा हुन्छ यी फाइदा १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured २५ प्रतिशत नेपालीमा मुटुरोग १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured कोरोनाको जोखिम अझै पूर्वानुमान गर्न सकिन्न : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured चौतर्फी विरोधपछि परीक्षा स्थगित १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured प्रदेश १ मा थपिए एक सय ८१ संक्रमित १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured कारागारको छतमा आइसोलेसन कक्ष बनाइँदै १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
Featured पुसबाट मुलुकमा २७ मेगावाट बिजुली थपिँदै १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:००
मनोरञ्जनसमाचार १२ आश्विन २०७७, सोमबार १३:०० स्पीक कर्नर
कोरोनाका कारण गएको फागुन महिनायता कुनै पनि चलचित्र रिलिज भएको छैन । रिलिज मात्र होइन, चलचित्र छायाँकन र निर्माणको अवस्था पनि शून्य छ । विश्वमा देखिएको कोरोनाको त्रासले गएको माघ महिनादेखि नै नेपाली चलचित्र क्षेत्र केही प्रंभावित बनेको थियो । यही कारण २०७६ सालभित्र ७० वटाभन्दा धेरै चलचित्र प्रदर्शनीमा... Read more
मनोरञ्जनसमाचार ५ आश्विन २०७७, सोमबार १८:०० स्पीक कर्नर
बिर्तामोड– असोज दोस्रो सातादेखि ‘रागिनी आइडल सिजन–३’ हुने भएको छ । यसअघि भएका दुई वटा सिजनको भव्य सफलतापछि रागिनी संगीतालय भद्रपुरको अयोजनामा तेस्रो संकरणको ‘रागिनी आइडल सिजन–३’ हुन लागेको हो । आयोजक भरत मैनालीका अनुसार प्रतियोगिताका लागि प्रतियोगी छनोट गर्न फारम वितरण भइरहेको छ । यसअघिका संस्करणहरु स्टेजमार्पmत् भए पनि... Read more
मनोरञ्जन ११ भाद्र २०७७, बिहीबार १७:०० स्पीक कर्नर
झापा – गायिका रचना रिमाल र सरोज ओलीको नयाँ गीत ‘पहिलो पल्ट भेट हुँदा’ सार्वजनिक गरिएको छ । विहीबार गज्जब टिभी युट्यूब च्यानलमार्फत् पहिलो पल्ट भेट हुँदा’ गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । दिनेश थपलियाको शब्द तथा अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको उक्त गीतलाई रिकेश गुरुङले एरेञ्ज गरेका हुन्... Read more
मनोरञ्जन ८ भाद्र २०७७, सोमबार १२:०० स्पीक कर्नर
झापा– जन्मदिनमा भावुक हुँदै कलाकार दीपाश्री निरौलाले अभिनेता राजेश हमालबारे गरेको टिप्पणीप्रति ठूलो पश्चाताप व्यक्त गरेकी छन् । त्यति मात्र होइन, उनले आफूभन्दा सिनियर कलाकारका विषयमा टिप्पणी गरेर ठूलो भूल गरेको स्वीकार पनि गरेकी छन् । राजेश हमालका फ्यानसँग फेरि एकपटक उनले रुदै माफीसमेत मागेकी छन् । आफ्नो व्यक्तित्व... Read more
मनोरञ्जन २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०८:०० स्पीक कर्नर
गज्जब क्रू टिमको तेस्रो प्रस्तुति ‘फूलबुट्टे चोली’ बोल गीतको भिडियो गज्जब टिभी युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालको शब्द रहेको उक्त भिडियोमा जिवेशसिंह गुरुङ र बेनिशा पौडेलको स्वर, दिपक शर्माको संगीत, साहस शाक्यको एरेन्ज, श्यामश्वैत रसाइलीको मिक्सिङ रहेको छ भने यस भिडियोलाई सहिन प्रजापतिले... Read more
मनोरञ्जन २५ बैशाख २०७७, बिहीबार ०९:०० स्पीक कर्नर
अभिनेत्री निरुता सिंह अहिले मुम्बईमा छिन् । महाराष्ट्रमा कोरोना संक्रमित बढेपछि लक डाउन निकै कडा गरिएको छ । त्यसैले, घरमै बस्नुपर्दा उनलाई दिक्क पनि लागेको छ । उनी भन्छिन्, ‘मनोरञ्जनका लागि अहिले टिक टक छ । यही नै सहारा भए जस्तो भयो ।’ उनले बुधबार मात्र दुई वटा टिकटक... Read more
मनोरञ्जन १ माघ २०७६, बुधबार २१:०० स्पीक कर्नर
चलचित्र ‘माइकल अधिकारी’ को झापामा छायांकन सुरु भएको छ । माघे संग्रातीको अवसर पारेर यो फिल्मको सुटिङ सुरु गरिएको हो । बुधवार बिर्तामोडको बसपार्कमा चलचित्रको शुभमुर्हुत गरिएको छ । गोपीकृष्ण मुभिजको व्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रले सेरोगेसी अर्थात भाडाको कोख सम्वन्धी कथाबस्तु समेटेको चलचित्रका निर्माता निरक पौडेलले बताए ।... Read more
मनोरञ्जन २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०८:०० स्पीक कर्नर
अहिले चलिरहेका नायिकाको आयु कति होला ? कति समय टिक्लान् उनीहरु ? उदाहरण लिऊँ, नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको । उनी चार वर्षअगाडि फिल्म ‘ड्रिम्स’बाट फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । त्यसपछि आठवटा फिल्ममा अभिनय गरिसकिन् । उमेर त्यस्तै २२ जति हो तर उनको चार्म घट्न थालिसक्यो । उनले... Read more
मनोरञ्जन ९ मंसिर २०७६, सोमबार २०:०० स्पीक कर्नर
भारतीय टेलिभिजनको लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोडपतिको ११औं सीजन चार दिनपछि बन्द हुँदैछ । शो शुरू हुनुअघि नै शोका सबै योजना आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिसकिएको थियो । केबीसीका होस्ट अमिताभ बच्चनले यसपालि केबीसी १३ हप्ता मात्र चल्ने र सीजनमा कुल ६५ एपिसोड हुने बताएका थिए । यसपालि शोमा... Read more
मनोरञ्जनसमाचार २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:०० स्पीक कर्नर
हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको चर्चित रियालिटी सो भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२ मा झापाको बिर्तामोडका २३ बर्षिय राम लिम्बु टप १२ मा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । २२ हजार प्रतियोगीबाट छानिदै उनी यो स्थानमा आउन सफल भएका हुन् । सुमधुर स्वरको कारण दर्शक र निर्णायकको मन जित्दै उनी झापाली... Read more
पछिल्लो २४ घन्टाभित्र कोरोना संक्रमणबाट १० जनाको निधन २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:००
घिरौलाका १० फाइदा २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:००
मोरङमा होटल साहुले कुट्दा ग्राहकको मृत्यु २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:००
नरिवल पानी पिउँदा हुन्छ यी फाइदा २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:००
२५ प्रतिशत नेपालीमा मुटुरोग २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:००
आफ्नो सम्पत्ति देशका लागि समर्पण गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा 23,783 views
बिर्तामोडको गाँउले होटलमा किरा परेको मासु बिक्री 5,102 views
बिर्तामोडका ब्यापारीलाई अपहरण गरी फिरौती माग्ने गिरोह पक्राउ 3,120 views
झापामा बालिकाले बलात्कारीलाई खुकुरी हानिन् 3,006 views
विर्तामोडका व्यवसायी जनता चश्मा घरका सञ्चालक मियाकाे मृत्यु 2,457 views
Archives Select Month September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014